सांसद हुमागाईले मागे माफी, यो ठाउँसम्म पुर्याउन योगदान गर्नेलाई दिए धन्यवाद – मिलिजुली खबर
सांसद हुमागाईले मागे माफी, यो ठाउँसम्म पुर्याउन योगदान गर्नेलाई दिए धन्यवाद
दुईदिन अघि काभ्रे एमालेलाई तथानाम गालीको भन्दै तीब्र आलोचना खेप्दै आउनुभएका बागमती प्रदेशका सांसद बसुन्धरा हुमागाईले कमिकमजोरि भए माफी दिन जनता समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ ।
आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सांसद हुमागाईले आफु लामो समयदेखि एमालेमा रहेको र अब भने नयाँ पार्टीमा रहने बताउनुभयो । सांसद हुमागाईंले यो ठाउँमा पुर्याउन योगदान गर्नु हुने सबैलाई धन्यवाद समेत दिनुभएको छ ।
सांसद हुमागाईले लेख्नु भएको छ: म नेकपा एमालेको सिपाही भएर ४७ साल देखि काम गर्दै आएको थिए । कमरेड केपी ओली गरेको अपराधलाई समर्थन गर्न नसक्नु मेरो गल्ती थियो होला । मेरो बारेमा मलाइ यो ठाउँमा पुर्याउन योगदान गर्नु हुने सबैलाई धन्यवाद छ ।
मैले जीवनमा जिम्मेवारीमा रहँदा देश र जनताको पक्षमा काम गर्दा कुनै गल्ती गरेको भए न्यायिक जनताको अदालतमा उभिन तयार छु । बाँकी जीवन सत्य र न्यायको पक्ष लाग्छु । मैले साँचो र सत्य बोले बापतको सजाय भोग्न तयार छु । बाँकी जीवन कमरेड माधब नेपाल र झलनाथ खनालले बनाउनु भएको पार्टीमा बिताउने छु ।
कम्युनिस्ट एकताको बिपक्षमा कहिल्यै नहुने प्रतिज्ञा गर्दछु । म कम्युनिस्ट पार्टीमा १२ बर्ष उमेर देखि आबद्ध छु । बाँकी जीवन कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनताको समृद्धिका लागि बिताउने छु । मैले जीवनमा कुनै कमिकमजोरि गरेको भए माफी अयोग्य सजाय दिन आम जनसमुदायलाई र न्यायीक अदालतमा अपिल गर्दछु ।’
दुईदिन अघि सांसद हुमागाईले ‘नेकपा एमालेको नाम र सुर्य चिन्हको दुवाइ दिएर लुट्न पल्केका मात्र एमालेमा हुने छ्न् बाँकी नेकपा एकीकृत समाजबादी पार्टीमा हुनेछ्न् ।’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । त्यस लगत्तै एमाले नेता कार्यकर्ताहरू आक्रोशित बनेका थिए ।
सांसद हुमागाई सूर्य चिन्ह र एमाले पार्टीबाटै २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा काभ्रे संघीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गतको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र (२) बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । अहिले भने प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र १ र २ का सांसद हुमागाई र लक्ष्मण लम्साल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा जानु भएको छ ।
एमाले काभ्रेको हिजो बनेपामा भएको बृहत कार्यकर्ता भेलामा बोल्ने अधिकांश बक्ताहरूले पनि सांसद हुमागाईको अभिब्यक्तिको तीब्र आलोचना गरेका थिए । कतिपय नेताहरूले पुष्टि गरेर देखाउन चुनौती समेत दिएका थिए ।
बनेपा फेरी डुब्यो
काभ्रेमा टिपर चल्न प्रहरीको मर्जी !
पनौतीमा टिपर चालक आन्दोलित, स्थानीय सरकार मौन !
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले रैथाने बालीको संरक्षणका लागि ‘बिउ बैंक’ स्थापना गर्ने
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले नगरबासीसंग ‘नगल्ने फोहोर किन्ने’